Isitudiyo, uQuintay - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSharne
Ukujija indlela yakho kwiindlela ezinothuli kwilali yokuloba yaseQuintay uya kufumana "iStudio." Ibekwe kwincopho yeliwa enembono yoLwandlekazi lwePasifiki, iinduli zeCurauma kunye neCaleta yaseQuintay. Isitudiyo sobuqu esinegumbi lokuhlala silala ezimbini ezinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, ibhedi ephindwe kabini, indawo yokuhlala kunye negumbi lokutyela. Iishiti kunye neetawuli zinikezelwe. Uya kuba nedesika yakho yabucala ejonge ulwandle apho unokutya i-alfresco kwaye ubukele ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Isitudiyo sihlala kufutshane nekhaya lethu kunye nomnyango ekwabelwana ngawo kwindawo yakho yokuhlala yabucala.
Ngomnganga wakho wabucala unokubukela izikhephe zokuloba zisiza kwaye zihamba nohambo lwazo lwemihla ngemihla kwaye ubukele iCaleta, ufumana amava amancinci obomi belali encinci yokuloba eChile. Ngexesha lokufuduka unokubona iminenga kunye namahlengesi.
IQuintay yilali encinci esebenzayo yokuloba iyure enesiqingatha ukusuka eSantiago kunye nemizuzu engamashumi amane anesihlanu ukusuka kwizibuko laseValparaiso. Kuphela malunga nemizuzu engamashumi amane ukusuka kwintlambo yewayini yaseCasablanca kunye neendawo ezintle zokutyelela. KwiCaleta yaseQuintay ungonwabela imisebenzi eyahlukeneyo, ukusuka ekuphumleni kunye nemibono entle, ukonwabela ukutya kwaselwandle kwenye yeendawo zokutyela ezintandathu ukuya kundwendwela umzi-mveliso omdala weminenga owawusakuba lishishini laseQuintay. Ukukhwela iKayaking, ukuntywila kwi-scuba diving, ukukhwela ihashe, uhambo ngesikhephe sasekhaya ehlotyeni, umnenga kunye nehlengesi ukubukela ngexesha lonyaka zezinye zezinto ezenziwayo. Ukuhamba ngemizuzu eyi-15 ehlathini kukuthatha ukuya ePlaya Chica kunye nesiqingatha seyure uhambe ukuya elunxwemeni olunesanti ePlaya Grande. Le lali ineevenkile ezimbini zokubhaka igrosari kunye neplaza. Kukho inani leendawo zokutyela ezithengisa ii-empanadas ezenziwe ekuhlaleni kunye nevenkile yokutyela yepizza eyenziwe ngamaplanga.
Umbuki zindwendwe ngu- Sharne
Siza kukunika iinkcukacha zethu zoqhagamshelwano phambi kokufika ukuze sikwazi ukukunika umkhombandlela xa ungena elalini. Sijonge ukukubulisa, sikubonise istudiyo kwaye sinikezele ngesikhokelo kwiindawo ezahlukeneyo kwindawo kunye nakwindawo ekufutshane. Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu kwaye siya kukushiya ukonwabele indawo kodwa sinokuthunyelwa ngqo ngayo nayiphi na imibuzo.
Siza kukunika iinkcukacha zethu zoqhagamshelwano phambi kokufika ukuze sikwazi ukukunika umkhombandlela xa ungena elalini. Sijonge ukukubulisa, sikubonise istudiyo kwaye sinikezele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quintay